Endless OS iri kuuya kuRaspberry Pi bhodhi munguva pfupi iri kutevera | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kuisa Endless OS pane Raspberry Pi
Iyo Raspberry Pi ibhodhi rakakurumbira kwazvo risingade kuiswa. Ndeapi mamwe ruzivo anodikanwa kune izvo uye zvatingaite zvimwe zvinhu, sekuisa sisitimu inoshanda. Imwe yesarudzo dzakanakisa dzekuve iye wepamutemo uye iyo inopa yakanyanya tsigiro ndeyeRaspbian, asi isu tinogona zvakare kuisa mamwe masisitimu akadai Android TV o Chrome OS. Imwe ichawedzerwa kune iyo runyorwa rweanotsigirwa masisitimu munguva pfupi: a Isingaperi OS izvo zvinonakidza nekuti zvakasiyana zvakanyanya kubva kumwe kugoverwa kweLinux.
KuCES 2020, Endless Inc. yakaratidza mashandisiro ayo sisitimu yekushandisa pa Raspberry Pi 4 ine 4GB ye RAM uye muvambi wayo, Matt Dalio, akataura kuti mumavhiki anotevera vanozotanga beta. Iyo 4GB ye RAM inogona kunge isinga fanirwe kumhanyisa Endless OS, sezvo iri yekureruka kugovera, asi, kana isu tichida kuishandisa pane Raspberry Pi, isu tichafanira kutenga 32GB kadhi zvirinani. Ichi hachisi chinhu chakataurwa naDalio, asi iyo desktop system inorema mukati ingangoita 26GB. Uye ndiko kuti "Endess" zvinoreva "kusingaperi" uye ino inoshanda sisitimu inowirirana yakawanda yakaiswa software. Muchokwadi, yakagadzirirwa kuti hatidi kuisa mamwe software.
Endless OS inosanganisira zvese software yatingave tichida
Isingaperi OS (pano wongororo yakakwana) inoiswa nekumisikidza mu kombiyuta kubira yevana uye chiitiko hachisi chakanyanya kunaka kune avo anoshandiswa kudesktop Linux. Zviri sehwendefa rinoshanda rinounzwa kumakomputa, asi iyo yakavakirwa paDebian. Endless Inc.yakaita shanduko kuHack interface, uyezve iko iko kusununguka zvachose. Iyo zvakare yakakwenenzverwa kupfuura makore mashoma apfuura.
Iyo Raspberry Pi vhezheni yeEndless OS inongoshanda chete paRaspberry Pi 4 B, asi zvinoramba zvichionekwa kuti ndeipi modhi (ye RAM) inodikanwa. Ivo vakafambisira mberi izvo inosanganisira chaiwo maficha eRaspberry. Kana nguva yacho yasvika, ivo vachaburitsa iwo anodiwa dzidziso kuti vaise iyi yakasarudzika Debian-yakavakirwa sisitimu yekushandisa pane inozivikanwa raspberry bhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Munguva pfupi inotevera tichakwanisa kuisa Endless OS pane Raspberry Pi
Zvakanaka, zvinonakidza kwazvo, kunyanya kana uchigadzira ma virgerias anoda asiri eSoviet anoonekwa, Endless anovimbisa zvakanyanya kana zvasvika pakushandisa zvinhu senge pamba otomatiki uye kumberi.